मुटुमाथि ढुंगा राखी तस्बिर कैद गर्दा……… – Mukhundo.com
mukhundo.com, २०७६ कात्तिक १३ बुधबार
स्वर्गीय स्वर सम्राट नारायाण गोपालले ‘आखा छोपी नरोउ भनि भन्नु पर्या छ, मुटुमाथि ढुंगा राखी हास्नु पर्या छ’ भन्ने गीत त्यसै गाएका होइन रहेछ । मानिसको वास्तविक जीवनमा मेल खाने यो गीत सोमबार मेरो जीवनमा मेल खायो । सहकर्मी हितैसीको पार्थिव शरिरको तस्विर आफैले कैद गर्नुपर्दा……
पीडा, छटपटाहट छदै थियो । त्यसमा जिम्मेवार र कर्तब्य । कस्तो कठोरता ? कति निर्दयीता ? अँहँ मैले कुनै कल्पना पनि गरेको थिएन । परिकल्पना भन्दा पनि परको कुरा । मलाई थाहा छ परिवारको सदस्य गुमाउदाको पीडा अनि सहकर्मी । एकै थालमा खाएका, एकै ओछ्यानमा निदाएका अनि एउटै उद्धेश्य बोकेर यात्रा गरेका सहकर्मीको निधनमा आफैले निधक्क तस्बिर कैद गर्नुपर्दा कस्को मन नदुख्ला र ? तै पनि जिम्मेवारका भारी बोक्नुपर्ने परिस्थिति पनि कस्तो हो ?
सोमबार सहकर्मी राङदान तामाङको अन्तिम संस्कार सकाएर म कोठामा फर्केपछि निकै रोए । आफैले आफैलाई धिक्कारे । तै पनि यो मेरो पेशा थियो तस्बिर कैद गर्ने मेरो कर्तव्य थियो ।
पत्रकारिता गरेको एक दशकको यो यात्रामा मैले कुनै पनि समाचार तस्बिर कैद गर्दा आत्माआलोचना गरेको थिएन । तर सोमबार जब सहकर्मीको तस्बिर कैद गर्न विवश भए । म आत्माआलोचित हुन पनि बाध्य भए ।
सुरुको फोनमा घटना भएको पत्याउनै सकिन..
शनिबार विहान दोरम्बा गाउँपाकिा १ का वडाअध्यक्ष ढालबहादुर रानाको फोनले मलाई निकै एैठन भएको थियो । मैले गलत हो भनेर पत्याउनै सकिरहेको थिएन । तर वडाध्यक्षले पुष्टि भइसकेको भनेपछि म केहीबेर निशब्द भए । सुरुमा सिन्धुलीको राटामाटामा दुर्घटना भएको भन्ने खबर आयो । मैले जिल्ला प्रहरी कार्याल सिन्धुलीमा फोन गर्दा सिन्धुलीमा कुनै पनि दुर्घटना नभएको भनेपछि उनी दुर्घटनामा नपरेको भन्ने मलाई लाग्यो । जब जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले पुष्टि गरिएको भन्ने समाचार केही अनलाईन पोर्टल र सामाजिक सञ्जालमा आयो । घटना राकाथुममा भएको रहेछ । सिन्धुलीमा होइन ।
त्यसपछि केही आफन्तलाई फोन गरे केही साथिभाईहरुलाई फोन गरे केही आफन्त गइसकेको रहेछ । केहीबेरमै काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी पाए तर काठमाडौँबाट जाने आफन्त पुग्दा उनलाई सिन्धुलीको खुरकोट पुर्याइसकेका थिए । शनिबार रामेछाप सदरमुकाम मन्थलीमा राखी आइतबार पोष्टमार्टम गरी आइतबार नै काठमाडौँ ल्याइपुर्यो । हामी उनको पार्थिव शरिरको प्रतिक्षा गरिरहे । सबै आफन्तको अनुहार मलिन थियो । रुग्न थियो र शोकमा थियो ।
आइतबार बेलुका बौद्ध स्थित तामाङ गुम्बामा राखियो । तामाङ संस्कार अनुसार पूजापाठ गरि सोमबार अन्तिम संस्कार गर्ने निधो भयो ।
राङदान दाईको पार्थिव शरिर लिन रुपा भाउजु, उहाँका छोराछोरी पुगेको थियो । उहाँहरु निकै भावविहल देखिन्थे । मैले बोल्न सकिएन उहाँहरुसंग । घटनाको बारेमा अरुबाटै जानकारी लिए । घटनाको बारेमा उहाँहरुबाट लिदा थप पीडा हुन्छ भन्दै मैले उहाँहरुसंग कुरा गर्न मानेन । किनभने मैले धेरै घटनामा आफन्तसंग कुराकानी गर्दा झन बढी पीडामा रोएको देखेको छु । त्यही भएर मैले उहाँहरुसंग कुरा गर्न मानने ।
सोमबार विहान रुपा भाउजूले मलाई बोलाएर फोटो र भिडियो गर्न भनिन् । सुरुमा मैले हुदैँन भन्छु भनेको थिए । तर भाउजूको इच्छालाई मैले पनि नाई भन्न सकिएन र हुन्छु भनेर म भिडियो बनाउने तयारीमा लागे ।
फोटो र भिडियो कैद त अहिले धेरैले गर्छ तर किन रुपा भाउजूले मलाई नै गर्न लगाएको हो भनि म निकै सोचे । केही समय अघि राङदान दाइको किवी खेती, नर्सरी तथा उहाँले गर्नुभएको कामको बारेमा भिडियो रिपोर्ट बनाएका थिए । केही बर्ष अघि पहिलो पटक मैले टेलिभिजनमा उहाँले खेती गरेको किवीको बारेमा समाचार प्रसारण गरेका थिए । त्यही भएर उहाँको अन्तिम संस्कारको पनि पछिसम्म सम्झना होस् भनेर भन्न खोज्नु भएको हो की भन्ने लाग्यो । तर जब म तस्बिर कैद गर्छु भनेर क्यमेरा समते म निकै दुःखी भए ।
हिजो मात्र संगै छुटेको थियो । संगै ९ घण्टा काम गरेर छुटेका थियाौँ । बेलुका संगै खाना खाएर मलाई मेरो कोठासम्म पुर्याएर फर्केका थिए । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ उनकै अन्तिम संस्कारको भिडियो बनाउनुपर्यो । म निकै रोए । तस्बिर र भिडियो कैद गर्ने मनाशायमा थिएन तर रुपा भाउजुको वचनलाई मैले नकार्न सकेन ।
उनीसंग धेरै पहिलादेखि घनिष्ट थिएन । चुनावताका वेलामा हामी संगै तत्कालिन माओवादीको संगठनलाई सहयोग गर्न संगै हिडेका थियौँ । चुनावी प्रचारप्रसार चुनावी अभियानमा साथ दिएका थियौँ । त्यसपछि अन्य काममा हाम्रो त्यति भेटघाट भएन । पछिल्लो समय म टेलिभिजनमा जोडिएपछि उनीसंग निकै नजिक भयौँ । म रसुवा हुँदा बखतमा पनि उनीसंग कुराकानी हुन्थ्यो । उनीसंग भेटघाट भइरहन्थ्यो । उनले मलाई आफ्नै जिल्ला फर्कन निकै जोड गरेका थिए । तर म काठमाडौँसम्म मात्र फर्के रसुवाबाट ।
त्यसपछि उनको र मेरो भेटघाट बाक्लिदै गयो । उनी कृषि क्षेत्रमा अझ राम्रो बन्ने धाउन्नमा थियो भने म चाँही पत्रकारिता क्षेत्रलाई अझ मजबुद बनाउने दाउमा थिए ।
गएको बैशाखबाट म टेलिभजनबाट बाहिरीएसंगै हामी कृषि र पत्रकारिता क्षेत्रलाईसंगै लैजाने निधो भयो । र हामीले रेडियो स्थापनाको अवधारणा अघि सार्यौँ । रेडियोको काम अहिले पनि अघि बढीरहेको छ । हामीले इजाजत लिने तयारीमा थियौँ । र यही तिहार लगत्तै रेडियोको इजाजत पाउने र लगत्तै रेडियोको स्थापना गर्ने तयारीमा थियौँ ।
उनी दोरम्बाबाटै रेडियो बजाउने र त्यसमा आफ्नो स्वामित्व पनि रहने गरी उनी र म बीच कुराकानी भएको थियो । सुरुमा हामीले सहकारी मार्फत रेडियो संचालन गर्ने निर्णय गर्यौँ । तर पछि हामीले निजी क्षेत्रकै संस्थाबाट इजाजत लिने निर्णय गर्यौँ । त्यो मेरो र अर्को एकजना साथीको नाममा रहेको कम्पनीबाट इजाजज लिने निर्णय पस्चात म राजधानी आएको थिए ।
हामी कृषि क्षेत्रमा नयाँ आमय र नेतृत्व लिने तयारी गरिरहेको थियो । हामीसंगै लगानी गर्ने र कृषि र संचारलाई एकैसाथ विकास गर्ने योजना थियो ।
सुरुमा हामीले सिन्धुलीको जग्गाको कुरा गरिरहेका थियौँ । सिन्धुलीमा अलि महंगी हुने देखेपछि उनी रामेछापको राकाथुमतिर लागेको फोन कुराकानी भएको थियो । राकाथुम जाने कुरा उनको नयाँ योजना थियो र आकस्मिक पनि ।
सिन्धुलीको राटामाटाको ५० रोपनी जग्गाको कुरा भइरहेको थियो । तर त्यो जग्गालाई छोडेर उनी रामेछापको जग्गामा लागेको शुक्रबार कुराकानी भएको थियो । ती क्षेत्रमा ड्रागन फ्रुट खेतीको सम्भावना देखेपछि हामीले त्यो क्षेत्रलाई समेट्ने कुरा भयो ।
उनीसंगै गएका कृष्णबहादुर कार्कीलाई म चिन्दिन तर उनले मलाई कृष्णा दाइकाे कम्पनीका कार्ययाेजना बनाउने बेलामा कृष्णा दाइ पहिलादेखि नै कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेकाे भनेका थिए । दोलखाको कृष्ण दाई पनि त्यो प्रोजेक्टमा समेट्ने तयारी गरिरहेकाे थियाे । तर मैले कृष्ण दाईको अनुहार पनि देखेको छैन । कृष्ण दाईको नाममा रहेको तितैचौर कृषि फार्मको नाममा हामीले एउटा कार्ययोजना पनि बनाएका थियौँ बिहिबार ।
लगानीको कुरा हामीले गरेकै थिएन । रेडियो र उक्त कृषि परियोजनामा कस्ले कत्ति लगानी गर्ने भन्ने कुनै टुंगो भएको थिएन । मैले रेडियोमा तपाईलाई राम्रै शेयर दिने बचन दिएको थिए, भने उक्त कृषि परियोजनामा पनि राम्रै शेयर दिने बचन हामीवीच भएको थियो । तर लगानीको कुनै ठोस निर्णय भएको थिएन ।
रेडियोमा बढीमा १० प्रतिशत मात्रै दिने भनेको थिए तर उनले २५ प्रतिशत मागिरहेको थियो । त्यसमा तिहारपछि मात्रै टुंगो लगाउने भन्दै हामीवीच शेयरमा देखिएको मतभेद सल्टिएको थियो । यी सबै बाबजुत उनले संचार र कृषि क्षेत्रको विकास एकैचोटी भयो भने मात्र आर्थिक क्षेत्र मजबुद हुने तर्क बारम्बार दोहोर्याईरहेका थिए । आज उनी छैनन् तर उनको सपना पुरा गराउने प्रयत्न चाँही जारी छ ।
Copyright October 30, 2019 Mukhundo.com Protected. All Rights Reserved.